अभावमा फक्सकनको बयान पछि एप्पल समस्यामा | म म्याक बाट हुँ
एप्पल र अन्य टेक्नोलोजी फर्महरूको लागि प्रोसेसरको अभावमा फक्सकन पहिलो स्थानमा छ। समाचार पटक्कै राम्रो होइन । र यो बीचमा संकेत गरे जस्तै हो वाल स्ट्रीट जर्नल, कम्पोनेन्टको यो अभाव २०२२ को अन्त्यसम्म रहनेछ.
यसको मतलब यो हो कि एप्पल जस्ता कम्पनीहरू जुन हामीले सम्झन्छौं ती मध्ये एक हो जसलाई धेरै आवश्यक पर्ने यी कम्पोनेन्टहरू माग आपूर्ति गर्न हतारमा छन्। अब आउने महिनाहरू फर्मको लागि पहिले नै जटिल छन् तर सबै कुराले संकेत गर्दछ अर्को वर्षको लागि धेरै परिवर्तन हुनेछैन.
आईफोनलाई हानि हुनेछ तर एप्पलका बाँकी उपकरणहरू पनि
तार्किक रूपमा, एप्पलको फ्ल्यागशिप उत्पादन यी चिप अभाव समस्याहरू याद गर्ने पहिलो हुनेछ, जसरी हामी कपर्टिनो फर्मका बाँकी उपकरणहरूमा ध्यान दिनेछौं। Foxconn Apple को लागि मुख्य आपूर्तिकर्ता मध्ये एक हो र यो क्यालिफोर्नियाली कम्पनी को लागी राम्रो छैन। आईफोन मुख्य प्रभावित मध्ये एक हुन सक्छ र हामी यो अभावमा बजारले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछ र विशेष गरी कम्पनीका शेयरधारकहरू जो वर्षौं वर्ष लाभको माग गर्दछन् भनेर हेर्नेछौं।
अर्कोतर्फ हामी एप्पल सेवाहरूमा राम्रो वित्तीय परिणामहरू फेला पार्छौं। यी कम्पोनेन्टहरू आवश्यक पर्दैन जुन आज छोटो आपूर्तिमा देखिन्छ, त्यसैले कम्पोनेन्टहरूको अभावको यो प्रवृत्ति कम भएन भने कम्पनीले २०२२ मा कब्जा गर्न सक्ने किनारा हुन सक्छ। अहिलेको लागि, हामीसँग टेबलमा के छ त्यो कम्पनीको लागि राम्रो हुनेछैन र त्यो हो माग अहिले उपलब्ध आपूर्तिभन्दा बढी हुन सक्छ, जसले ढुवानी समयलाई असर गर्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » हाम्रो बारेमा » फक्सकनको अभावको बारेमा बयान पछि एप्पल समस्यामा
Sonos स्ट्यान्ड, सेल्फ र अन्य सामानहरू २०% छुटमा